Waxaan u dagaalamaynaa Xuquuqda Aadanaha! by ∴ www.PixelHELPER.org
Haddii waligaa dhibaato kaa haysato oo aadan aqoon waxa xiga ee aad sameyso, ka dib raadi PixelHELPER
Holocaust Memorial Marrakech oo loogu talagalay dhibanayaasha LGBT ee la illoobay ee kaligii taliyihii Nazi ee Morocco. Waxaa burburiyay dawladda ka soo horjeeda LGBT ee Morocco.
Waxaa qoray PixelHELPER
Gargaare pixel wuxuu eegaa adduunka oo dhan Shabakad firfircoon & farshaxan yaqaan xuquuqda aadanaha ka hor Dulmiga & xorriyadda hadalka la dagaallamo. Farshaxanka waxaan rabnaa arrimaha bulshada ee muhiimka ah farta ku fiiq. Waxaan sidoo kale ku shaqeynaa Mashaariicda gargaarka ee Afrika. Leh Goobaha rootida ee qasacadeysan soo saar si loo kordhiyo Deganaanshaha cuntada waayo, Xerada Qaxootiga, Gobollada isku dhaca & masiibooyinka dabiiciga ah rooti raagaya ee gasacadaha ku jira. Waxaan kordhineynaa Deganaanshaha cunnada ee Afrika. Aagga Gargaarka deg degga ah PixelHELPER waxay isku dayeysaa inay ku xigto warshadaha rootiga ee qasacadeysan ee ku yaal Afrika ee ku dhow Xeryaha qaxootiga ee UNHCR in la furo cusbitaalada weelasha mobilada ee guurguura. Fadlan naga caawi at the Ku tabaruc shay menu ah iyo taageerida shaqada ururkeena.
Angela Merkel waxay siisaa Julian Assange magangalyo siyaasadeed. Video kartoon farshaxan
Dadku waxay abuuraan bulshada! Ilaa iyo inta aan aadanaha,Liebe iyo kaftanka ku xidhna, wax dhib ah maleh annaga kala sooco, Dadku dhiirrigelin buu ku siinayaa Toleranz, U dulqaadashada farxadda leh ee daahirka ah kaftanka, cabirka lacag la’aanta shakhsiyadda waa xaq, hadafka dhabta ah ee Menschen noqon.
Saadaasha iftiinka ee Hoteelka Sonnenbichl, oo ah kursiga Jarmalka ee boqorka jirdil u geysanaya Thailand.
Iyada oo loo marayo shaqada farshaxanka Aan dunida ka dhigno meel fiican oo u hoggaansana isbeddel bulsheed oo weyn, oo ujeedkiisu yahay in uu noqdo mid qoto dheer bulshada dimoqraadiga ahMagaca Toleranz sollte Gargaare pixel sheegashada xaqiiqda, dulqaad in aan loo dulqaadan. Ahmiyada la saarayaa waa mashaariicda loogu talagalay xoriyadda farshaxanka, xuquuqda aadanaha iyo ka dhanka ah Anti-Nacayb.
Samee waxyaabaha qaldan sababaha saxda ah!
In kasta oo ay dad aad u badan oo muslimiin ahi ku nool yihiin Morocco, Uighurs-ka lagama taageero Shiinaha. Waxaan u dhisnay xusuus loogu talagalay arrintan, taas oo ay soo saareen saxaafadda Carabtu oo keliya ka dib markii wargeys ku yaal Israel uu ku soo qoray qaab la mid ah xuska Holocaust-ka Berlin. BBC Carabi ayaa ka warbixisay mashruucan. Tani waxay dhalisay boomerang saxaafadeed caalami ah kaas oo daboolka ka qaadistiisa aan diiradda loo saarin Uyghurs-ka laakiin ku saabsan khilaafka Israel / Falastiin. Farshaxanka wuu guuleystay!
Sheekada Holocaust-ka reer Marooko ee ku taal Wikipedia weligeed laguma sheegin xeryaha addoonsiga ee ku yaal lamadegaanka ay Yuhuuddu ku dhinteen. Xusuusteenna waxaa burburisay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Morocco ka dib sannad dhisme ah. Tan waxaan ku keenay mawduuca shaqada khasabka ah ee taariikhda Morocco ee Wikipedia si loola dagaallamo been abuurka taariikhiga ah iyo Yuhuud nacaybka. Iyo in kastoo ay ahayd rakibidda farshaxanka bilowgii si loo tilmaamo xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee Shiinaha ee ka dhanka ah Uyghurs.
Farshaxanka farshaxanku wuxuu mar labaad duulay qaanad hal abuur leh oo lagula dagaallamayo cunsuriyadda ka soo horjeedda Muslimka iyo in la xuso shaqaalihii qasbay ee ku jiray Wikipedia.
Nasiib darrose, Morocco ma yaqaanaan noocyada fanka ficil ee noocan ah. Kooxda
Goobteena Moroccan-ka, oo leh wareegii hore ee munaaraddii oodhan ee Orodka ka soo jeedda Sayidka dahabka, mas'uuliyiinta Morocco waxay nolosha ka dhigayaan mid adag. Meel jikada lagu kariyo oo loogu talagalay 500 oo qof oo ka tirsan shirkadda 'THW German' ayaa lala wareegey, qabrigii loogu talo galay shaqaale horumarineed oo Jarmal ah oo leh bulldozer ayaa la burburiyey iyo goob wax lagu kariyo oo ah kuwa lagu caawiyo, oo ay dadku si toos ah uga faa iidaysteen, ayaa lagu kufsaday dhulka.
ka Gargaare pixel la dagaallama shabakad caalami ah oo u dhaqdhaqaaqa iyo farshaxanno hab aan caadi ahayn ka dhanka ah shilalka bulshada. Farshaxanada kaqeybgalaya ayaa inta badan adeegsada tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay iyo dhammaan aaladaha lagu qoslo si dhibaatooyinka looga dhigo diirada warbaahinta.
Daro awgood by qaylada dunida, waxaynu ku soconnaa, xasilloon oo nabdoon, cabsi la'aan khatar iyo in la ilaaliyo gool sare maskaxda ku wareegsan dhulka. Waa la aaminsan yahay asaasiga ah our in mabaadi'da Revolution Faransiis yihiin "xorriyad, sinnaan, bahda" noolaaday inuu la diriro celceliyay of arxandarro siyaasadeed.
Burburkii Rabbiga Walter Lübcke mural oo ay soo dirtay dowladda Morocco.
Madaxweynaha Bundestag Wolfgang Schäuble ayaa ka sheegay Bundestag in Lübcke "Si furan ayey ugu furan tahay gelitaanka bulshadayada furan ee loo dhisaayo: sharaf, dulqaad iyo dadnimo. Xoriyadda farshaxanka ayaa loo hanjabay adduunka oo dhan Sidaa darteed PixelHELPER!
Aasaasaha PixelHELPER waa fanaanka ilayska Oliver Bienkowski oo u dhashay Jarmalka. Farshaxanno kale oo ficil & ficil iyo sawirqaadeyaal badan ayaa ku baahsan adduunka oo dhan waxayna u wada shaqeeyaan PixelHELPER adduun ka wanaagsan.
Keliya kuwa u malaynaya inay si kala duwan isu beddelaan dunida
Laakiin annaga Zorn waa mid la fahmi karo, iyada oo la tixgelinayo waxa aan ka qabnay. Maxay ahayd inaanu samayno? ayeeyo Ku shub shaaha Bigwigs ee Ceylon?
Maxaa nagu leh? waalidiinta auf den Beeraha suufka ah waa la gowracay loogu talagalay Hindida, iyo kuwa saboolka ah ee Saxones Copper iyo Coltan mines meel u dhow Dresden, si uun sidaas Qalabka korontada Congolese 30 ee qoys kasta leeyihiin.
Iyo kookaha iyo Warshadaha caleenta ee Palatinate! Generations of Palatine waxay leedahay iyaga u gaar ah Caafimaadka ayaa burburay waayo kuwa kuwooda xun Shirkadaha Afrika Iyo Kalluumeysatada Soomaaliyeed ee ku dhufatay badda woqooyigeena madhanTaasi waa sababta ay dad badani u baxeen Burcad-badeedda Bariga Faaris ahaan.
Ku dhowaad dhammaan maroodiyaasheen ayaa toogtay, iyada Qalabka chess iyo furayaasha piano, Hadda waxaad la imaanaysaa jeeps iyo safar iyo eeg maroodigii ugu dambeeyay ee ku yaala Bavarian Forest on. Taasi waa adag tahay.
und markii Herer uu weeraray Jarmalka, iyo middan Xasilinta dadka ka soo horjeeda Swabians, Taas ayaa sidoo kale ka shaqeysa. Waxyaabahaas oo kale, ma aha inaad iska dhejisid dharka, Weli way jirtaa kadib 100 sanoAdigoon kaa soo kabsan.
Waxaan halkan u taaganahay jilbaha kiimikada qashinka ah, si aad u awooddo Bangladesh ee 7 Euro Jeans awooddo.
Immisa gabdhaheena ah ayaan ku lumay Minaaradaha dhoobada ee Bielefeld, sidaa daraadeed Bonzes ee Sierra Leone heesi karaa "Dheeman waa gabdhaha saaxiibka ugu fiican ”, Hadda waxay sidoo kale ka imanayaan badda Mediterranean waxayna weli rabaan ku noolaan jirdhiskayaga.
Haa, maxaa kale? Maxaa kale oo aan kuu sameyn karnaa? Waqtiga qaarkood, way dhammaatayWaqtiga qaar wax badan ma qaban karno! Waqtiga qaar, ma jiri doono wax badan!
our Wadnaha waa mid aad u fog, Aber Fursadahayagu waa kuwo dhammaad leh.
Waxaan. Qalabaynta nidaamsan ayaa jebinaya qalab muhiim ah
Yaa yihiin PixelHELPERS?
Robin Hood Qof walba waa ogyahay. Qabsashada tuug la qabtay waxay ku dhacdaa halis xafiiltamaankuwaas oo shaqadoodu ay weli tahay caanka ah wuxuu ka badnaan doonaa kii asalka ahaa. Iyadoo PixelHELPER International dood ku saabsan Fanaanada caalamiga ah ee 70 mid adduunka ka fiican, ka soo qaado dadka hodanka ah ee Yurub oo sii saboolka adduunka oo dhan. Waxaan nahay on. Iyada oo dadkii badnaa ee uu aamin wuxuu leeyahay PixelHELPER oo ah urur xuquuqda aadanaha xaruntiisa Afrika helay. Sannado waxaan u dagaalamaynaa sida Saaxiibka & difaaca masaakiinta iyo sida qarsoodi ah cadowga kuwa iyagu Awood & hanti Beytsuur Xadgudubka dulmiga.
Raashinka gargaarka degdegga ah ee Morocco
"PixelHELPER waxay kudareysaa dhismahooda kacaan dhismeedka farshaxanka & madadaalada shaqadooda"
ayaa sheegay in Dhaqanka raadiyaha Jarmalka
"PixelHELPER waa mid ka mid ah hal abuureyaasha ugu caansan fanka ficil siyaasadeed wuxuuna u taagan yahay qaab faneed la balaadhiyay," qaar baa leh. Waxaan leenahay: Farshaxanku waa inuu keenaa xanuun, kicin iyo kacdoon. Waxaan ka walwalsanahay farshaxanka oo ah qaab isku kalsooni bulsheed oo ku jirta ruuxa iftiinka. Ololaheennu waxay muujinayaan fursadaha farshaxanka inay yihiin awoodda shanaad ee gobolka. Sidaa darteed farshaxanku maahan muraayad aad ku dhegeysaneyso xaqiiqda, laakiin waa dubbe aad ku qaabeyso.
Waxaan aqoonsanaa fursadaha.
Waxaynu baranaynaa. Waan ciyaarnaa. Waxaan horumarinnaa fikradaha. Waxaan ka helnaa fikrado ka baxsan mugdiga. Waxaan u isticmaali karnaa kala sooca. Waxaan ka dhignaa mid cajiib ah, ama wax ka dhumo. Waxaan diirada saarnaa aragtida. Waxaan isku xirnahay. Waxaan bedeleynaa aragtidaada. Waxaan ka shaqeynaa hooska. Waxaan raadineynaa sababta nalalka. Jawaabaha ayaan bixinaa. Waxaanu istaagaynaa. Waxaan ku eedeyneynaa. Waxaan ku ciyaarnaa nalalka iftiinka ee gudaha naga gudaha ah. Waxaan ku qaadnaa dibadda.
Waxaan dhihi karnaa: Waxaan nahay PixelHELPER
Kuwa daciifka ah ayaa sidoo kale awood leh
Iska bixi oo iska cadee.
Kombiyuutarka PixelHELPER wuxuu ku socday adduunka.
Xalinta Rubik's Cube ee fiidiyowga ah "Dunida oo dhan 80 maalmood" waxay astaan ​​u tahay silsilad walaalo ah oo bini'aadamnimo oo adduunka oo dhan ah, kaas oo PixelHELPER uu si toos ah ugu qaabeeyo barnaamijkiisa isku-soo-uruurinta tooska ah ee barnaamijka 'Playstore' ee Android wuxuuna ku martiqaadayaa daawadayaasha inuu la falgalo.
Inta lagu guda jiro nolosha nolosha waxaan ka tagaynaa raadad badan. Sidoo kale in nolosha dadka kale kuwaas oo Waddooyinkiisa aan mar uun ka gudbeen, oo waxaan oon weli saamayn sidaas si xoog leh in ay nolosha ka dib qaaday jeedo kale. Waxaa jiri lahaa qadarin weyn ugu leh shuqulka pixels ku Gargaare Foundation sida a saamayn togan muddada dheer ku bulshadeena.
Waxaan leenahay dabacsanaan adduunka ka fiican.
Bini'aadamnimada oo ah waayo-aragnimo is-dhexgal ah oo ku saabsan durdurinta tooska ah. Xakamee qaybinta adoo adeegsanaya emoticons-ka Facebook. Zombies ma laha jinsi, midab, ama diin; kaliya maskaxda! Mashruuca “Zombies without Border” wuxuu isu arkaa inuu yahay barxad gargaar is dhexgal ah. Magaca waxaa laga soo qaatay kumbuyuutarro badan oo zombie ah oo dibedda laga xukumo. Ujeeddadeennu kama yaraynno xallinta dhammaan masiibooyinka bani'aadamnimada iyada oo loo marayo caawimaad is-dhexgal ah oo ka socota daawadayaasha iyadoo loo marayo durdurinta tooska ah. Hadafkeenu: 24 saac oo toos ah ayaa looga socdaa meelaha kulul ee adduunka. Ku wehelinta wariyeyaasha aagaga dagaalka, u qaybinta gargaarka xeryaha qaxootiga ama ugaarsiga ugaarsadayaasha ee Beerta Qaranka ee Kruger. Aaladdayada: Qiiroyaasha Facebook ayaa xukuma raxan caawiyaha ah waxayna go'aamiyaan waxa la qabanayo.
Marka laga eego dhanka farsamada oo kaliya, waxay u shaqeysaa sidan oo kale oo aan ku bilaabi karno wadiiqo toosan oo leh cunsurro xakameyn hufan ka dibna ku martiqaadno shaqaalahan "Zombies without Border" shaqaalaheena tooska ah. Sidan oo kale waxaan isha ku haynaa qoorta hawleedyada xakameynta isdhexgalka oo aan si deg deg ah uga falcelinno isbeddelada durdurinta tooska ah ee goobta dhibaatada ka taagan.
PixelHELPER Foundation | Soo bandhigida app ee Marrakech, Morocco
Anigoo ku hadlaya magaca aasaasaha PixelHELPER, 2009 ayaa abaalmarinta abaalmarinta "Kacaankaaga bilaabi" shaqadiisii ​​guri-la'aanta.
2013 bilaabay pixels Gargaare xilli shire Storm guri la'aan, taas oo warbaahinta badan Jarmal ee helay, oo ay ku jiraan Zeitung Süddeutsche la article muujinta on our tallaabo ah.
2014 ayaa ku fashilantay fadeexad NSA / Drone oo ay la yeelatay ololaha 10 ee Safaarada Mareykanka, gaarey warbaahinta todobaadlaha ah ee arrimaha warbaahinta.
Sannadkii 2015 ganacsatadii cusbeyd ee hubka ee Dr. Kooxda Oetker waxay caan ku noqotay waddanka oo dhan iyadoo loo marayo saadaalinta iftiinka ee Wasaaradda Difaaca Federaalka habeen dhaweyd.
Laga soo bilaabo Rainbow
PixelHELPER waxay rabtaa in ay ka soo horjeesato cadaadiska khaniisiinta ee dowladaha wadajirka ah ee adduunka. Waxaa weli jira dalal aad u badan oo adduunka ah sida Iiraan, Nigeria, Mauritania, Sudan, Yemen, Saudi Arabia ama Imaaraadka Carabta, halkaas oo khaniisnimada waa sharci darro iyo ciqaab ay dhimasho!
Jacaylku ma yaqaan jinsi, midab maqaar ama diin! Jacaylku ogyahay xuduud! Waxaan dooneynaa in aan ku faafinno qoraalkan, PixelHELPER, aduunka oo dhan oo leh mashruuca farshaxan "Light Rainbow".
Qalabka qabowga qabow ee loogu talagalay dadka gurya la'aanta ah
Jiilaalka ayaa soo dhowaanaya & dadka hoylaawayaasha ah waxay u baahan yihiin caawimaaddeena. Xalkeenna: PixelHELPER kaabsalka xaaladaha degdegga ah ee qaboojinta dadka lagu keydsho waddooyinka Jarmalka. Sannad kasta Jarmalka ka yar ayaa ku dhinta shilalka diyaaradeed marka loo eego dadka hoylaawayaasha ah ee dhaxanta u dhinta. Jarmalka gudaheeda waxaa jira in ka badan nus milyan guri la'aan ah oo ka baxsan shabakadda badbaadada bulshada. Mar labaad iyo mar labaad ayaa dadka loo diraa banaanka albaabka marka heerkulku ka hooseeyo eber ka dibna si xun u barafoobo. Dhibaatada hoy la'aanta ee Jarmalka lafteeda looma xallin qaab waara. Halkani waa halka barnaamijkeenii dib-u-dhexgalinta ee loogu talagalay dadka hoylaawaha ahi uu ka ciyaaro. Laga bilaabo kaabsalka xaaladaha degdegga ah ee qabow si looga badbaadiyo dadka hoy la'aanta ah geerida si fudud looga badbaadi karo, waxaan dhiseynaa nidaam la dagaallamaya dhibaatooyinka aasaasiga ah ee hoy la'aanta, nabadgelyo la'aanta, fursadaha shaqo iyo kala fogaanshaha bulshada, sidaas darteedna si tartiib tartiib ah dadka ula dagaallamaya si ay nolol caadi ah ugu noolaadaan awood.
Waxaanu nahay kaliya wax yar oo keli ah oo daanyeer ah oo ku yaalla meeraha yaryar ee orbiting xiddiga celceliska.
Aasaasihii PixelHELPER Oliver Bienkowski oo la jooga Eyga wadada Moroccan ET
Haddii waligaa dhibaato kaa haysato oo aadan aqoon waxa xiga ee aad sameyso, ka dib raadi PixelHELPER November 15th, 2021Oliver Bienkowski
ka dhigista Android App Bahrain 13 Chancellery Federaalka Sirdoonka dowladda dhexe Adeeg sirdoon midabo leh baadiyaha dab Shiinaha maalgalinta dadka Erdogan dabka jirdil freeRaif ra'yiga lacag la'aanta ah hercules gargaarka baniaadanimo ololaha ololayaal Catalonia miinooyinka Jacaylku ogyahay xuduud la'aan Livestream durdurrada Live Caawinaad aad loola tacaalo Loreley Morocco anigaa iska leh NSA ee guriga Oberwesel maxaabiista siyaasadeed Rainbow for Orlando hubkiisa Sacuudi Carabiya raxan Help guga Isbaanish Spirulina Uighurs Uyghur ilaalinta madax-bannaanida United Stasi America upcycling ganacsiga hubka Haa waan ku baari karnaa! socodka